2nd Solo Album အတွက် အိပ်ရေးပျက်ခံပြီးကြိုးစားပြင်ဆင်နေတဲ့ Kai
EXO အဖွဲ့ဝင် Kai ရဲ့ ဒုတိယမြောက် solo album ဟာ လာမဲ့ November 30 ရက်နေ့ဆို ထွက်ရှိတော့မှာပါ။ Kai ရဲ့ ဖွင့်ဟချက်အရ MV အတွက် ရိုက်ကူးရေးကို ၁၉ ခေါက်လောက် လုပ်ခဲ့ရကြောင်း၊ဒါ့အပြင် album ထဲက b-side track တွေဟာလည်း ရူးချင်စရာကောင်းလောက်အောင် မိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ထို album ကို သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေ၊ အတွေးအမြင်တွေ၊ ခံယူချက်တွေနဲ့ ပုံဖော်ထားပါတယ်တဲ့။ album ပြင်ဆင်စဉ်ကာလတုန်းကဆို တချက်မှမနားဘဲ ရိုက်ကူးသီဆိုခဲ့တာမို့ သူ့ဘဝရဲ့ အဆိုတော် career 10 နှစ် သက်တမ်းတလျှောက်လုံးမှာ ဒီအချိန်က အပင်ပန်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခုလိုကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ Kai ရဲ့ album ကို ပရိတ်သတ်တွေကလည်း အားပေးဖို့စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။
EXO official page ကလည်း November 19 ရက်နေ့ကနေ စပြီး MV မထွက်ခင်ထိ teaser တွေ ဆက်တိုက် တင်ပေးတော့မှာပါ။ Kai ကတော့ ဒီရက်ပိုင်း SNS မှာ active ဖြစ်လျှက်ရှိပြီး Bubble မှာ စာပို့လိုက်၊ ပုံပို့လိုက် Instagram မှာ live လွှင့်လိုက်နဲ့ fan တွေကို အဆက်အသွယ်လုပ်နေပါတယ်။ album နဲ့ ပက်သက်ပြီး သူစိတ်လှုပ်ရှားစွာပို့ခဲ့တဲ့ စာတွေကို ခုလို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
🐻: အမှန်တိုင်းပြောရရင်လေ2ရက်လောက် က နိုးတစ်ဝက်အိပ်တစ်ဝက် ဖြစ်နေခဲ့တာ
🐻: album ကို ကျွန်တော်ကြိုးကြိုးစား ပြင်ဆင်နေဆဲပါ။
🐻: မင်းတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ချပြချင်နေပြီ။
🐻:comeback ချိန် ဆို အမြဲ အလုပ်ရှုပ်တာသိတယ်မလား။
🐻: ဒီတခေါက် comeback က အရင်ထက် ပိုအချိန်ယူရတယ်။
🐻:”ကျွန်တော့်အတွက် ကမ္ဘာအသစ်ဆိုတာဘာလဲ .. ဟုတ်လား?? ကျွန်တော်ကတော့ Peach လို့ဘဲ ဖြေမယ်။ ဒါပေမဲ့ ခု ရပ်တန့်ဖို့လိုနေပြီ။
“Kai ဟာ EXO အဖွဲ့ရဲ့ ဒုတိယ makanae ပီသချက်ပါဘဲနော်။ အသည်းတယားယားဖြစ်အောင် ပရိတ်သတ်တွေကို ပြောနေဟန်လေးက တကယ်ချစ်စရာလေးပါ။”
Photo Credit: Bubble chat
Next ခံစားချက်မကောင်းတဲ့နေ့တွေမှာ Lisa လေး ဘယ်လိုမျိုးအားအင်မွေးပြီး ဖြတ်သန်းလေ့ရှိသလဲ »
Previous « 2021 ခုနှစ်မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံး ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ (၄) ခု